Hlobo luni lwezimbiwa okufanele ngiluthenge? | Amadoda aSitayela
Hlobo luni lwezimbiwa okufanele ngiluthenge?
Izikhathi eziningi ukuthenga imikhiqizo yezimonyo kuyi-odyssey uma singenalo ulwazi oluyisisekelo lokwazi ukuthi hlobo luni lwento esifuna ukuyithenga noma uma bengazange baseluleke ngaphambilini. Isibonelo esicacile yilapho ucabanga ngokuthenga ukukha udlawana. Ungaba yinto engaphili uma ufika esitolo bakubuze umbuzo obalulekile: Ufuna hlobo luni lokudlikiza? Ngaleso sikhathi awunalutho futhi akunasikhathi sokuphendula ukuthi awazi nhlobo, balokhu bekubuza…. Flat, iqonde, iphoyinti elihle, i-oblique? Hhayi-ke, ukuze lokhu kungaphinde kwenzeke kuwe, namhlanje ngizokusiza ukhethe udlawana ozowukha.
Uzovumelana nami, ukuthi izidlawana ziyisisekelo kunoma yisiphi isikhwama sezindlu zangasese esizihloniphayo, ngoba zisisiza ukuqeda izinwele ezicasulayo ezingabukeki ngokushesha, ngempumelelo nangokuhlanzeka. Ngokudonsa okuncane siyenza inyamalale ezimpandeni. Kepha… Yiziphi izinhlobo zezidlabha esingazithola emakethe?
Amamodeli ayisisekelo we-3 we-tweezers
Ama-tweezers wephuzu elihle: Zisisiza ukukhipha izinwele ezisanda kuzalwa, lezo ezincane futhi ezingabonakali kangako.
Izimpande zempumulo eziqondile: Zinembe kakhudlwana futhi zikhipha izinwele ezi-encyst ethe xaxa. Ngaphakathi kwalolu hlobo lwezinsipho eziqondile, sithola izinhlobo ezimbili. Ithiphu flat noma inkalankala. Labo Ithiphu Flat zenzelwe izinwele eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ezinde. Nezinkalankala, izosisiza ukucacisa okuningi ngezinwele ezimfushane.
Amathiphu Wethiphu Ovundlile: Ziphelele ezinweleni ezinde njengalezo zamashiya. Bavumela ukuthi izinwele zisuswe ngamunye ngamunye, bakhohlwe ngokuncinza nokudonsa
Singabathola futhi benomzimba obushelelezi noma onolaka, okusisiza ukuthi sivimbele oshayayo ukuthi angashibiliki futhi sikwazi ukuyibamba kalula.
Manje njengoba usuyazi izinhlobo zezimbiza ezikhona, kufanele ucabange nje ukuthi iluphi uhlobo olulungele kakhulu uhlobo lwezinwele onalo, Kumele ngikutshele ukuthi singathola futhi nezidladla ezenziwe ngezinsimbi ezahlukahlukene. Okuvame kakhulu yi-nickel nensimbi engagqwali. Ngincamela okokuqala, ngoba yize zibiza kancane, zihlala isikhathi eside kunensimbi engagqwaliLezi zenziwe ngensimbi ethambile futhi zikhubazeka kalula. Ngaphakathi komzimba we-caliper, lokhu kungaba futhi izinhlobo ezimbili, bushelelezi noma bushelelezi. Ukuze uzijwayeze udlawana, Kungcono ukuthi uyithenge kabi ukuze uvikele ugoqo ekushelelekeni iminwe.
Ukunakekela udlawana, nokuthi bahlala bephelele njalo, zihlanze njalo emva kokusetshenziswa ngakunye ngotshani osikiwe otshwaleni ukuze kuthi izinsalela zezinwele zinyamalale, kuthi uma sezihlanzekile, uzigcine endaweni ethile lapho zingazukuqhekeka noma zisonteke khona futhi uhlala unazo ziphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Hlobo luni lwezimbiwa okufanele ngiluthenge?
Ojosaka, kubalulekile ku-wardrobe yethu
Kiwi amandla Shake